VaIsraeri Vanopinda Munyika Yakapikirwa | Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
VaIsraeri Vanopinda muKenani
Joshua anotungamirira vaIsraeri pakukunda Kenani. Jehovha anopa vatongi simba rokununura vanhu vake pakudzvinyirirwa
MAZANA emakore vaIsraeri vasati vapinda muKenani, Jehovha akavimbisa kupa nyika iyoyo kuvana vaAbrahamu. Panguva ino vachitungamirirwa naJoshua, vaIsraeri vakanga vava pedyo nokutora Nyika Yakapikirwa.
Mwari akanga atonga vaKenani sevanhu vakakodzera kuparadzwa. Vakanga vazadza nyika yacho nounzenza hunosemesa uyewo kuteura ropa neutsinye. Nokudaro, maguta evaKenani aizokundwa nevaIsraeri aifanira kuparadzwa zvachose.
Zvisinei, vasati vapinda munyika yacho, Joshua akatuma vasori vaviri vakanogara muguta reJeriko nomumwe mukadzi ainzi Rakabhi. Akapinza vasori vacho mumba make uye akavachengetedza kunyange zvazvo aiziva kuti vaiva vaIsraeri. Rakabhi aitenda muna Mwari wevaIsraeri, nokuti akanga anzwa zvakaitwa naJehovha achiponesa vanhu vake. Akaita kuti vasori vacho vamupikire kuti iye neveimba yake vaisazourayiwa.
Pave paya, vaIsraeri pavakapinda muKenani kuti varwise Jeriko, Jehovha akaita chishamiso chokuti masvingo eJeriko akoromoke. Mauto aJoshua akaita chipitipiti achipinda ndokuparadza guta racho asi haana kuuraya Rakabhi neveimba yake. Zvadaro, mumakore matanhatu mauto achirwisa nokukurumidza, Joshua akakunda zvikamu zvikuru zveNyika Yakapikirwa. Pashure paizvozvo, nyika yacho yakagoverwa kumadzinza evaIsraeri.
Ava pedyo nokupedza basa rake raaiitira Mwari kwenguva refu, Joshua akaunganidza vanhu. Akadzokorora navo zvakanga zvaitirwa madzibaba avo naJehovha uye akavakurudzira kuti vashumire Jehovha. Zvisinei, pashure pokunge Joshua nevamwe varume vakuru vaaishanda navo vafa, vaIsraeri vakasiya Jehovha kuti vashumire vanamwari venhema. Kwemakore 300, rudzi rwacho haruna kuramba ruchiteerera mitemo yaJehovha. Panguva iyoyo, Jehovha akabvumira vavengi vevaIsraeri, vakadai sevaFiristiya, kuti vavadzvinyirire. Asi vaIsraeri pavaidana kuna Jehovha kuti avabatsire, aigadza vatongi kuti vavaponese. Vatongi vacho vose vakasvika ku12.
Nguva yeVatongi inotaurwa mubhuku reVatongi yakatanga naOtinieri uye yakaguma naSamsoni, murume akanga aine simba kupfuura vose vakanga vararama. Chokwadi chinokosha chinoratidzwa charatidzwazve munhoroondo iyi inonakidza chakanyorwa mubhuku reBhaibheri reVatongi ndeichi: Kuteerera Jehovha kunounza zvikomborero, uye kusateerera kunounza matambudziko.
—Kubva muna Joshua; Vatongi; Revhitiko 18:24, 25.
Nei Jehovha asina kuuraya Rakabhi neveimba yake?
VaIsraeri vakaitei pashure pokunge Joshua afa?
Ichokwadi chipi chinokosha chinoratidzwa mubhuku reBhaibheri reVatongi?